आन्दोलनसम्बन्धी केही भ्रम र वास्तविकता | BIVAS
← नागरिक सर्वोच्चता नहुंदा होन्डुरसमा अमेरिकी हस्तक्षेप
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च कतारको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न →
आन्दोलनसम्बन्धी केही भ्रम र वास्तविकता
नागरिक सर्वोच्चताको निम्ति नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएको आन्दोलनको पछिल्लो कडीको रुपमा एकीकृत नेकपा माओवादीले यतिबेला तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलनप्रति नियोजित ढंगले पार्न खोजिएको भ्रम’bout यहां संक्षिप्त रुपले खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१.आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चता नभई माओवादी सर्वोच्चता भन्ने ’bout
विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताले गणतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरिरहेका छन् । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यद्वारा अब जनताको सर्वोच्चता स्थापित भयो भन्ने कुरा सबैलाई लागेको थियो । तर, विडम्बना फेरि पनि सामन्ती शासनकै शैलीमा राष्ट्रपतिद्वारा जनताको अधिकार हनन् भएको छ । जबसम्म जनता महान् हुन्छन्, उनी भन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुदैनन् । सम्पूर्ण सत्ताका संयन्त्रलगायत राजनैतिक दलहरु समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताको म्याण्डेटभन्दा बाहिर जाने अधिकार कसैलाई छैन । जबसम्म लोकतन्त्रका आधारभूत शर्तहरु स्थापित हुंदैनन् तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रुक्नेवाला छैन । यी विषयहरुमा कोही पनि राजनैतिक दलहरु असहमत हुनुपर्ने कुरा छैन । तर्क वितर्क गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । यी विषयहरुलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गर्दा कोही पनि राजनैतिक दललाई घाटा हुंदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । तर यहां केही दललाई यो कुरा सैह्य छैन । किनकि उनीहरु जनतालाई शक्तिशाली ठान्दैनन् । राजनीति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने आदर्शलाई अनावश्यक ठान्छन् र सत्ताको सांचो अन्य बाह्य ध्रुवमा देख्छन् । माओवादीको यो आन्दोलन जनतालाई शक्तिशाली बनाउनु भन्दा अर्को कुनै स्वार्थद्वारा निर्देशित छैन । माओवादीको सर्वोच्चता होइन, हामी अढाइसय वर्ष पुरानो सामन्ती सर्वोच्चता ढाल्न चाहन्छौं र १९३ वर्ष पुरानो औपनिवेशिक सर्वोच्चता परास्त गर्न चाहन्छौं । २०१७ सालदेखि स्थापित सैनिक सर्वोच्चताको खारेजी गर्न चाहन्छौं । यदि यी विषयहरुसंग घांटी जोडिएर जीवित रहेका केही प्राणी अस्तित्वमा छन् भने ’em पनि नष्ट हुने कुरासाग हाम्रो कुनै गुनानो रहने छैन । त्यसैले माओवादीले आफ्नो सर्वोच्चताका लागि नभई वास्तविक अर्थमा भोका, नाङ्गा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न चाहन्छ ।
२. माओवादी देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने ’bout
यो पनि एउटा भ्रम हो । किनकि माओवादी पार्टी नै सबै भन्दा धेरै जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी हो । युद्धकालदेखिको इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौं । पटक-पटक एकतर्फी युद्धविराम भइरहेका हुन्थे । दोरम्बा लगायतका युद्धविराम अवधीमा नरसंहार हुंदा पनि संयम भएर पार्टीले कदम चाल्ने गर्दथ्यो । युद्धबन्दीहरुलाई स-सम्मान व्यवहार हुन्थ्यो र भाडा दिए घरसम्म पुर्‍याइदिने काम पार्टीले नै गर्थ्यो । त्यो कुराले हाम्रो पार्टीलाई कहिल्यै घाटा पनि लागेन बरु माओवादी जिम्मेवार राजनैतिक शक्ति हो भन्ने कुरा नै विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भएको थियो । यतिबेला माओवादी विगत ७ महिना देखि आन्दोलनमा छ र यसले सडक र सदन दुबैमा आन्दोलन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को बजेट सदनमा पेशगर्न हामीले नै दिएका थियौ । त्यतिबेला पनि सरकारद्वारा लचकता देखाएर बजेट पेश भएको होइन । अहिले उक्त बजेट पारित भएको छ, यो बजेट सरकारी पक्षको उदारता, सहकार्य र सहमतिको प्रयासबाट होइन, माओवादीको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका कारण पारित भएको हो । आन्दोलनसंग लचक भएर सहमतिमा जाने र समस्या हलगर्ने काम यो सरकारबाट कहिल्यै पनि भएन । सरकारपक्ष सधैं गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहे पनि माओवादी आफैले सहमतिको प्रयास भने हदैसम्मको लचकता प्रस्तुत गरेर गरिरहेको छ । माओवादी अत्तालिएको अर्थमा एकथरिले प्रचार गरेका छन् । माओवादी अत्तालिएको होइन देश र जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार भएको हो । यो बजेट पारित हुन दिएर माओवादीले यो सन्देश दिन सफल भएको छ । यसले फाइदा नै भएको स्थिति छ ।
३. माओवादी आफैंले सरकार छाडेको हो भन्ने ’bout
खासगरी यो कुरा बेलाबखतमा सत्ताधारी दलहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै हिड्ने गरेको पाइन्छ । माओवादीले कसैको डरले या रहरले सरकारबाट राजीनामा दिएको होइन । निर्वाचित सरकारको निर्णय आधारातमा राष्ट्रपतिले बदर गरेपछि यो देशमा २ वटा प्रधानसेनापति र दुईवटा सत्ताका केन्द्रहरु निर्माण भए । त्यो बेला या त भिडन्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो या त द्वैत सत्ताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले देशलाई गृहयुद्धबाट जोगाउनु नै त्यतिबेलाको बुद्धिमतापूर्ण कदम थियो । अर्कोतिर जननिर्वाचित सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाएर नागरिक सर्वोच्चता हनन् गरेपछि कुर्सी समाएर बसिरहनु भन्दा जनतामा पुगेर आन्दोलन गर्नु नै सही निर्णय हुने थियो ।
४. बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने या यो सकारमा समावेश हुने
हामीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न सरकार बनाउनु या यो सरकारमा समावेश हुनु होइन । केही व्यक्तिहरुले माओवादी सरकारबाट हट्नुको छटपटी पनि भन्न भ्याएका छन् । उनीहरु सरकारबाट हट्दा जे अनुभूति हुन्छ त्यस्तै माओवादीलाई पनि हुन्छ भन्ने ठान्ने गरेका छन् । माओवादी सरकारलाई अल्पमतमा पारे ढालिएको होइन, कुर्सी समाएर बसिरहन उसलाई कसैले पनि रोक्नसक्ने थिएन । सदनमा बहुमत पुर्‍याउन खोजेको भएपनि त्यो कुनै ठूलो विषय थिएन । हामी सरकार बनाउने कार्यमै सहभागी भएका होइनौं । सदनमा माओवादीको बहुमत छ या छैन भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन । किनकि हामी सदनको प्रतिस्पर्धामा गएकै छैनौं । अर्कोतिर हामी यो सरकारमा समावेश हुने भन्ने कुरा नै हुंदैन । यो सरकार राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट जन्मिएको न्यूनतम लोकतान्त्रिक विधि प्रकृया र योग्यता पूरा नगरेको सरकार हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक सरकारमा माओवादी समावेश हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । जब सम्म राष्ट्रपतिको असंवैधानिक ‘कू’ सच्चिदैन तबसम्म माओवादीले सरकार निर्माण गर्ने र सरकारमा भाग छुट्याउन जाने कुनै कार्यमा सहभागी बन्दैन ।
५. राष्ट्रपतिले गल्ती गरेका छैनन भन्ने ’bout
यो पनि भ्रमपूर्ण कुरा हो । हाम्रा राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हुन् । उनले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । सरकारको निर्णयमा लाहाछाप लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्दा अर्को अधिकार उनलाई छैन । सेनाका परमाधिपतिको मानार्थ पदवी पनि राष्ट्रपतिलाई छ तर परमाधिपतिलाई सैन्य फर्मेशनमा काम गर्नका लागि कुनै अधिकार छैन । कुनैपनि कोणबाट हेर्दा पनि उनलाई उक्त कदम चाल्ने अधिकार रहादैन । राष्ट्रपति स्वयमले संवैधानिक होइन राजनैतिक कदम चालेको हुं भनेका छन् तर राष्ट्रपति कुनै पनि राजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित र प्रभावित हुनु नै असंवैधानिक र अवैधानिक विषय हो । उनले सबै राजनैतिक दल, सबै जनताको अविभावक बन्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यो नभएर २/४ वटा दलको दबाबमा जे कदम चाल्न पुगे त्यो अक्षम्य छ । संविधानको दायरा भन्दा बाहिर निस्केर गलत क्रियाकलाप गर्ने राष्ट्रपति कसरी संविधानका संरक्षक हुन सक्छन् ? संविधानको संरक्षणले नै सर्वप्रथम आफैले संविधानको पालना गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।
आन्दोलनको उपलब्धी केही पनि छैन भन्ने वितर्कहरु पनि यदाकदा सुनिने गरिन्छ । माओवादीको यो सातमहिने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने हामी धेरै उपलब्धीमा छौं । हो, यो सरकार ढालेर अर्को सरकार निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागि उपलब्धी नभएको देखिन सक्छ । खासगरी राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रचार प्रसार र आमसहमति बन्न पुगेको छ । वर्तमान सरकारलाई टिकाउन चाहनेहरुको जनस्तरबाट नै तिरस्कारको वातावरण पनि बन्न पुगेको छ । लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा उत्रिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनी गर्दा माओवादीको कार्यक्रममा जनताको कुनै समर्थन छैन भन्नेहरुलाई ठूलो जवाफ बनेको छ । अर्कोतिर माओवादी अराजैतिक, अलोकतान्त्रिक र हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्छ भनेर छरिएको भ्रमपनि साफ हुन पुगेको अवस्था छ । यति धेरै जनता सडकमा उत्रिदा पनि बांसुरी बजाएर बस्ने नालायक सरकार पनि हुंदोरहेछ भनेर उसको नैतिकता राम्रोसंग जनताले बुझ्न पाएका छन् । यिनीहरु जनताको समर्थनमा होइन कुनै अदृश्य शक्तिको भरमा सत्तामा टांसिएर बसेका रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । उनीहरु समस्या समाधान गर्ने र जनताले भने जस्तो संविधान निर्माण गरी अघि बढ्ने विषयमा होइन कानमा तेल हालेर जसरी पनि सरकार छाड्नु हुंदैन भन्ने उद्देश्यमा छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । बजेट पारित गर्न दिएको समय सिमासम्म आउंदा आन्दोलनकारीहरु नैतिक रुपले विजय भएको र सत्ताधारीहरु लाचारी र नैतिक रुपले पराजित बनेको स्थिति छ । यि र यस्ता धेरै प्रकारका भ्रमहरु रहे पनि हाम्रो आन्दोलन दिन प्रतिदिन बलियो बन्दै गइरहेको छ । आन्दोलनलाई एकपछि अर्कोगर्दै नयां नयां शैलीमा विकास गर्दै अझ सशक्त बनाउंदै लैजानु पर्दछ । एउटै विषय र तौर तरिकामा घुम्नदिनु हुंदैन । अब पार्टीको सामू अझ सशक्त र जुनसुकै प्रकारको समस्यासंग जुध्नसक्ने तयारीका साथ आन्दोलनको स्तर बृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ ।
अन्तमा सत्ताधारी दलका केही पार्टीहरु संविधानसभा विघटन गरी पुनः देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न उद्दत रहेको खुलासा भइसकेको परिस्थितिमा सम्पूर्ण शान्तिप्रेमी जनसमुदायलाई सचेत बनाउंदै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउादै राष्ट्रलाई बचाउनुभन्दा अर्को कुनै विकल्प नरहेको कुरामा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
Posted by CHINTAN on डिसेम्बर 4, 2009 in BLOG, GUEST
6 responses to “आन्दोलनसम्बन्धी केही भ्रम र वास्तविकता”
डिसेम्बर 4, 2009 at 2:35 बिहान
Thanks for your good article Suwas comred!
डिसेम्बर 4, 2009 at 3:02 बिहान
गणराज्यको घोषणा खतरालाई आमन्त्रण र मुलुक विभाजनको कारकतत्त्व हुने छ । तात्कालीक क्षुद्र लाभ खोज्ने, तर दूरदर्शिता र दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्ने, दलको दायराबाट उठेर राष्ट्रिय नीति बनाउन नसक्ने-नचाहने मनोवृत्ति नै नेपाली राजनीतिमा छाएको गम्भीर विकृति हो । http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/8647.html
डिसेम्बर 5, 2009 at 3:04 बिहान
प्रधानमन्त्रीको परिवारै कालापत्थरमा
शुक्रवार, 04 डिसेम्बर 2009 19:37 नागरिक
बलाराम बानियाँ, काठमाडौं कात्तिक १९ (नागरिक) –
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सगरमाथाको आधार शिविरमा आफ्नो सिंगो परिवारलाई लगेर जलवायु परिवर्तनबाट त्यहाँ बढ्दै गएको नकारात्मक असर देखाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकलाई पर्दै गएको असरप्रति संसारको ध्यानाकृष्ट गर्न शुक्रबार सगरमाथाको कालापत्थरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को ऐतिहासिक बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीले परिवारलाई लगेर सर्वोच्च शिखर देखाएका हुन्।
भ्रमणमा सहभागी स्रोतका अनुसार पत्नी गायत्री, छोरी सुमन र छोरा सौरभ प्रधानमन्त्री नेपालसँगै नेपाली सेनाको पुमा हेलिकप्टर चढेर बिहीबार लुक्लामा गएका थिए। प्रधानमन्त्रीको परिवार शुक्रबार साँझ सोही विशेष हेलिकप्टरबाट राजधानी फर्किएको थियो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रमणमा पत्नी सीता र छोरा प्रकाशलाई लाने गरेका थिए, प्रधानमन्त्री नेपालले दाहालकै बाटो पछ्याउँदै सिंगै परिवारलाई सगरमाथामा लगेको जानकारी स्रोतले दियो।
प्रधानमन्त्री चढेको विशेष हेलिकप्टरमा पत्नी गायत्री, छोरी सुमन र छोरा सौरभका अतिरिक्त उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला, रघुजी पन्तलगायतका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थिए।
पत्नी गायत्री, छोरी सुमन र छोरा सौरभ प्रधानमन्त्रीसँगै लुक्लास्थित होटलमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्रीले परिवारलाई लुक्लाबाट मन्त्रिपरिषद् बसेको स्थल कालापत्थरमा समेत लगेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० मिनेट चल्दा प्रधानमन्त्रीको परिवार अल्लि पर बसेको र सकिएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै हेलिकप्टरबाट लुक्ला झरेर राजधानी फर्किएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ।
डिसेम्बर 6, 2009 at 2:43 बिहान
संविधानसभामा पार्टीको भूमिका समाप्त भएको ठहर गर्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले स्वायत्त मधेश प्रदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि शनिबारदेखि तेस्रो मधेश आन्दोलन सुरु भएको जनाएको छ।
डिसेम्बर 7, 2009 at 4:22 बेलुका
कैलालीको बलिया गाविस-८ स्थित डुढेझारी जंगलमा शुक्रबार भएको झडपपछि जिल्लामा अझै तनाव कायम छ । शनिबार पनि ठूलो संख्यामा परिचालित सुरक्षाबलले सुकुम्बासीलाई
हटाउन उनीहरूका करिब एक हजार झुप्रामा आगो लगाएको छ ।
डुढेझारी जंगल खाली गर्न कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र बाँकेबाट थप सुरक्षाबल कैलाली ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उत्तम सिंहले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । शनिबार सुरक्षाकर्मीले सुकम्बासीले अवैध रूपमा बनाएका छाप्रा भत्काउने क्रममा कुनै अपि्रय घटना भने भएन ।
शुक्रबारको भिडन्तमा प्रहरी जवान पदमसिंह ऐर तथा सुकुम्बासीतर्फ लट्टे विक, इन्द्रा विक, नरेन्द्र विक, सञ्जय ढकाल र रूपलाल डगौराको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार डुढेझारी वन क्षेत्रका सबै टहरा हटाउन नसकिएकाले शनिबार थप सुरक्षाबल परिचालन गरिएको हो । अतिक्रमण हटाउन जनपदसँगै सशस्त्र प्रहरी र वनरक्षक परिचालन गरिएको थियो ।
यसैबीच, शनिबार दिउँसो माओवादीको लम्कीमा भएको विरोधसभामा तस्बिर खिचिरहेका दुई प्रहरीलाई वाइसिएलले नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी उग्रतारा गण टीकापुरमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दीपेन्द्र पाण्डे र इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार रामबहादुर रोकायालाई वाइसिएलले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यता, शुक्रबार प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएका गुटु सुर्खेतका वीरबहादुर महराको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उद्धार गरी लम्कीस्थित लालरत्न अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेको छ । घटना’bout प्रतिक्रिया दिँदै एकीकृत माओवादी कैलालीका सेक्रेटरी उत्सवले ‘यो घटनामा प्रहरी ज्यादती’ भएको आरोप लगाए । उनले सुकुम्बासीका तर्फबाट आक्रमण नभएको बताए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने सुकुम्बासीको गोली प्रहार भएपछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले आत्मसुरक्षाका लागि गोली चलाएको दाबी गरे ।
शुक्रबारको भिडन्तपछि डुढेझारी जंगल खाली भएको छ । तितरबितर भएका अतिक्रमणकारीले विभिन्न ठाउँमा गएर आगजनी र तोडफोड गरिरहेका छन् ।
सो वन क्षेत्रमा १० मंसिरदेखि अतिक्रमण सुरु भएको थियो । अतिक्रमण व्यापक बन्दै गएपछि गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले डुढेझारी वन क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
घटनाको विरोधमा एकीकृत माओवादीले धनगढी र लम्कीमा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा एकीकृत माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज हरि ज्ञवाली र सेक्रेटरी हरिप्रसाद चौधरीले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखे ।
शुक्रबार सरकारले प्रहरी र सेनासमेत परिचालन गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर पाँचजना सुकुम्बासीको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा एक प्रहरीको पनि मृत्यु भएको थियो ।
सुकुम्बासीको हत्या भएको भन्दै माओवादीले आह्वान गरेको थारुवान क्षेत्र बन्दका कारण शनिबार मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित भएको थियो । घटनाको विरोधमा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले अनिश्चितकालीन कैलाली बन्द घोषणा गरेको थियो भने माओवादीको थारुवान राज्य समितिले पनि थारुवान क्षेत्र बन्द गराएको थियो ।
बन्दका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले काठमाडौंबाट धनगढी ल्याइँदै गरेका दिनेश अटो मोटिभ्सका १२ वटा नयाँ मोटरसाइकल राखेको ट्रक जलाएका छन् । १२ मोटरसाइकल उनीहरूले लिएर गएका छन् । त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा काठमाडौंबाट धनगढीतर्फ आइरहेका चारवटा यात्रुबाहक बस, एउटा ट्रक र दुईवटा किया बस पनि जलाइएको छ । शुक्रबार साँझ धनगढी र अत्तरियामा गरी दुई सरकारी मोटरसाइकल र दुईवटा जिप जलाइएका थिए ।
नेपालगन्जमा उपचार हुँदै
नेपालगन्ज/ कैलालीको डुढेझारीमा भएको गोलीकाण्डमा घाइते भएका १७ जनाको नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका बलबहादुर विकको अवस्था गम्भीर भएका कारण भारतको लखनउ लगिएको छ । अर्का घाइते बलबहादुर केसीको पनि अवस्था गम्भीर छ ।
सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर घाइते भएका भीम थापा, गोपाल साउद, अमर बम, गंगाराम परियार, कालीप्रसाद सन्जेल, लक्ष्मी रानाभाट, रूपेश नेपाली, करनसिंह मालती, नेत्र बिष्ट, खड्गबहादुर महरा, कालीप्रसाद सत्याल, टेकबहादुर भाट, अमर अधिकारी, झपट विक र निशा भण्डारीको अवस्था खतरामुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
उनीहरूको हात, खुट्टा र शरीरका विभिन्न भागमा गोलीको छर्रा लागेको छ । घाइते करनसिंह मालतीले सुरक्षाकर्मीले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेपछि बाध्य भएर प्रतिकार गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । ‘सुरक्षाकर्मी आएर एकाएक घर जलाउन थालेपछि हामीले प्रतिकार गरेका हौँ,’ घाइतेहरूको भनाइ छ ।
K YO Pani Tehi Aandolan Haina Ra ?
डिसेम्बर 7, 2009 at 4:24 बेलुका
Uso bhaye Yo Pani Hola Ni Ta …
सोमबार, 07 डिसेम्बर 2009 13:22 नागरिक
लगातार तेस्रो दिन पनि कैलाली बन्द-
दिलबहादुर छत्याल, धनगढी मंसिर २२ (नागरिक)-
डुडेझाडी वन क्षेत्रमा आजदेखि पुनः सुकुम्बासी बसाउने जानकारी माओवादीले दिएको छ। लम्कीमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादीको अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ (क्रान्तिकारी) ले उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमै भएको दाबीसमेत गर्योङ।
घटनास्थल नजिकैको लम्की बजारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उसले सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म डुडेझाडी वन क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहिरहने जनाएको हो।
यसैबीच शुक्रबार भएको घटनालाई लिएर एकीकृत नेकपा (माओवादी) का सङ्घ-सङ्गठनले तेस्रो दिन कैलाली जिल्ला बन्द गराएका छन्। लगातारको बन्दका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ।
बन्दका कारण उद्योग व्यवसाय, यातायात, शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अर्धवार्षिक परीक्षा प्रभावित भएको छ। नियमित तालिकाअनुसार हिजैदेखि विद्यालयको परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्थ्यो तर माओवादीले आयोजना गरेको बन्दका कारण जिल्लाका विद्यालय खुल्नसमेत सकेका छैनन्।
बन्दकै कारण सुदूरपश्चिमको उत्सवका रुपमा मनाउन तयारी भएको ‘सुदूरपश्चिम महोत्सव २०६६’ सफल हुने-नहुने अन्यौल बढेको छ। महोत्सव मङ्सिर २५ गते सुरु हुँदैछ।
माओवादी उक्साहटमा वन अतिक्रमण गर्न गएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरी दमन हुँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए। घटनापछि उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्ने उद्देश्यले हिजो राति अबेरसम्म सर्वपक्षीय बैठक बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।